नेविसंघ विवाद : कांग्रेसमा ‘भाइरल ज्वरो’ ! – Online About
Home/Uncategorized/नेविसंघ विवाद : कांग्रेसमा ‘भाइरल ज्वरो’ !
निर्वाचित कार्यसमितिको नेतृत्व गरिरहेका सभापति नैनसिंह महरले राजीनामा दिएपछि नेविसंघमा तत्काल तदर्थ समिति बनाएर महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्ने माग उठ्न थालेको थियो । संस्थापन पक्ष मानिने विद्यार्थी समूहले १२ औं महाधिवेशनपछि मात्र ३२ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने अडान लिएको छ भने सिटौला पक्षीय मानिने विद्यार्थी समूहले तदर्थ समितिमै उमेर हदको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
आइतवार दिउँसो सिटौलाको गाडी कब्जामा लिन खोजेका संस्थापन पक्षीय विद्यार्थी समूहमाथि सिटौला पक्षीय विद्यार्थी समूहले आक्रमणको प्रयास गरेपछि स्थिति असामान्य बन्यो । एक समूहले अर्को समूहलाई ढुंगा, इँटा, पानीको बोत्तल जे भेट्टाउँछन्, त्यसले प्रहार गरे । ठूलै झडपको स्थिति बन्यो । तर केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भनेर कार्यालयभित्र कुरिरहेका नेताहरू भने बेखबर देखिए ।
‘बाहिर के–के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरलाई भनेका थिए, ‘केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भनेर हामीलाई भित्र कुराइएको छ, बाहिर झडपको स्थिति सिर्जना गरिएको छ । नेविसंघको विवादकै बारेमा हामीले आज बस्ने बैठकमा निर्णय लिन्छौं ।’
झडपपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । तर नेविसंघका बारेमा केही निर्णय भएन । बैठकले पार्टीको विधान लगायत महासमिति बैठकबाट अनुमोदित सबै दस्तावेजहरू बहुमतले पारित गर्यो । महासमितिको म्यान्डेटविरुद्ध गएर दस्तावेज पास गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सिटौला समूहले विरोध जनाए । तर केही लागेन । दस्तावेजहरू पास भएरै छोडे ।
कसको विवाद ठूलो : पार्टीको कि नेविसंघको ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारको राम्रो ‘वाचडग’ बन्ला भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको थियो । तर सरकार बनेको १ वर्षसम्म पनि कांग्रेसले संसदमा दरिलो उपस्थिति देखाएन । कांग्रेस आन्तरिक विवादमा रुमल्लियो ।
मंसिर २९ गतेदेखि पुसको पहिलो साताको अन्तिमसम्म बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले कांग्रेसको आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरिएको थियो । तर महासमिति बैठकमा झन् ठूलो विवादको बिजारोपण गर्यो ।
पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान्छु भन्दै सभापतिमा सपथ खाएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा आएपछि पार्टीभित्र झनै गुटबन्दी बढेको छ । पार्टीमा संस्थापन पक्षका अतिरिक्त नेता पौडैल, पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको गुट अहिले सतहमा देखिएका छन् । यी गुटभित्र पनि विभिन्न उपगुटहरू कायम छन् ।
नेविसंघको पछिल्लो विवाद भने महाधिवेशनका लागि तदर्थ समिति कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्नेमा केन्द्रीत छ । यसअघि पनि निर्वाचित अध्यक्ष महरले महाधिवेशन गराउन नसकेपछि तदर्थ समिति गठन हुने परम्परा नै बनिसकेको छ ।
यतिबेला फेरि नेविसंघको तदर्थ समितिको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । ३२ वर्ष माथिबाट नेतृत्व चयन हुने स्थितिमा नेता राजिव ढुंगाना, कृषिकेश जंग शाह, रत्न कार्की, सरोज थापा, पुष्पकुमार शाहीले सभापतिमा दावी गरेका छन् भने भने ३२ वर्ष मुनिबाट नेतृत्व चयन हुने अवस्थामा प्रकाश घिमिरे र प्रेमराज जोशीले सभापति दावी गरिरहेका छन् ।
महाधिवेशन गर्नका लागि गठन गरिने तदर्थ समितिले त्यसपछि चुनिने नेतृत्वमा प्रभाव जमाउन सक्ने आकलनका साथ विद्यार्थी नेताहरूले समितिमा आफ्नो नाम सिफारिस गराउनका लागि नेताहरूको घरदैलोसम्म धाउन भ्याएका छन् ।
विद्यार्थीको नेतृत्वले पार्टीको महाधिवेशनमा पनि अहम भूमिका खेल्ने गर्छ । पार्टीकै नेतृत्व चुन्नका लागि भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले नेविसंघको आन्तरिक विवादमा केन्द्रीय नेताहरूको पनि स्वार्थ गाँसिएको हो ।
सिटौला–गगन गुटको रणनीति
महासमिति बैठक सकिए लगत्तै राजधानीको एक रेस्टुरेन्टमा आफू नजिकका पत्रकारहरूलाई भेला गर्दै पूर्वमहामन्त्री सिटौला र युवा नेता गगन थापाले आफूहरूले सभापति देउवा र नेता पौडेललाई नेता नै नमानेको अभिव्यक्ति दिए ।
पार्टीमा नेतृत्व कब्जा गर्न विद्यार्थी भातृ संगठनमा प्रभाव जमाउन जरूरी छ भन्ने बुझेका सिटौलाले नेविसंघको निर्वाचित कार्यसमिति विघटन भएको मौका पारेर ३२ वर्षे उमेरहद लागू गर्नुपर्ने माग राखे ।
तर संस्थापन पक्षीय विद्यार्थी नेताहरू भने नेविसंघको १२ औं महाधिवेशनपछि मात्र उमेरहद लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । पार्टीमै उमेरहद लागू गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको कांग्रेसको भातृ संगठनको उमेर विवाद छिट्टै समाधान हुने देखिन्न ।
महिलालाई रोग नलुकाउन आग्रह
सरकारले डेरी व्यवसायलाई चौपट पार्न लागेको भन्दै व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी